कोरोना महामारीले अभूतपूर्व वैश्विक ऋणको विरासत छोड्ने भो - Jhilko
काठमाडौ । कोरोनाभाइरस महामारीले अभूतपूर्व वैश्विक ऋणको विरासत छोड्ेर जाने भएको देखिएको छ । देशहरूमा धरमराउँदो आर्थिक बृद्धि र बिग्रिदै गरिबीको अवस्था यो महामारीले ल्याउन लागेको हो । यसको समाधानका लागि अर्थतन्त्रमा खर्चलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि विशाल परिमाणमा राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले विशेषगरी विकासशील देशहरूलाई ऋणको विरासत छोडेर जाने देखिएको हो ।
सन् १९३०को वैश्विक महामन्दी भन्दा पनि खराब अवस्थामा पुगेको वैश्विक अर्थतन्त्रलाई धक्कबाट जोगाउन केन्द्रीय बैंकहरू र सरकारले कम्तीमा अहिलेसम्म १५० खर्ब अमेरिकी(१५ ट्रिलियन) अमेरिकी डलर बराबरको प्रोत्साहन खर्च कार्यक्रमा सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
यसले सन् २००८–९को वित्तीय संकटयता संकटबाट उब्रिने प्रयासमा रहेका देशहरूमा थप ऋणभार बढाउने छ ।सन् २००७ यता कुल वैश्विक ऋण बर्ढर ८७० खर्ब (८७ ट्रिलियन) अमेरिकी डलर बराबर पुगेको छ । यसमा सरकारहरूको हिस्सा ७०० खर्ब अमेरिकी डलर बराबर रहेको द इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेशनल फिनान्स (आइआइएफ)को आँकलन छ ।
साथै आइआइएफले यो वर्ष मात्रै वैश्विक ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन(ग्लोबल डेट र जीडीपी)को अनुपात २० प्रतिशत बिन्दु देखि ३४२ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने जनाएको छ । आर्थिक संकुचन ३ प्रतिशतले हुने र सन्२०१९को सरकारी ऋण दोब्बर हुने छ ।
महामारी आउन अघि नै सापेक्षिकरूपमा इटली जस्ता देश ऋण भारको समस्याबाट पीडित रहेका थिए । ट्रिपल ए क्रेडिटमा रहेका जर्मनी र अमेरिकाले पनि आफ्नो हैसियत गुमाउने देखिएको छ । यी देशहरूलाई आउदा दिनहरूमा वित्तीय खर्च बढाउनका लागि केन्द्रीय बैंकहरूमा भर पर्नुपर्ने देखिएको छ ।
पाइनब्रिज इन्भेस्टमेटको बहुसम्पत्ति विभागका वैश्विक प्रमुख माइक केलीले जनाए अनुसार नीति निर्माताहरूका लागि विशाल ऋणभार र जीडीपी संरचनाको विषयमा सोच्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ ।
यो वर्ष विश्व अर्थतन्त्र ५देखि ६ प्रतिशतको संकुचनमा पुग्ने र यसको जीवन बचाउन ऋण र खर्च मात्र अतिरिक्त बाटो हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सार्वजनिक घाटा राष्ट्रिय आयको तुलनामा १० प्रतिशतले बढ्ने छ । यो सन् २०१९मा ४ प्रतिशत थियो ।
सन् २०१३यता पहिलो पटक युरोपको पावर हाउसको रूपमा चिनिएको जर्मनीले नयाँ ऋण लिन गइरेको छ । अमेरिकाको दोस्रो त्रैमासिकमा विगतको तुलनामा पाँच गुनाले बढेर ऋण करिब ३० खर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने छ ।
अमेरिकाको संघीय ऋण यो वर्ष जीडीपीको १०० प्रतिशत बढ्ने एक अनुमान छ । यो सन् १९४०को दशक यता पहिलो पटक देखिएको हो । सन् २०३०मा यो १२५ प्रतिशतले बढ्ने डच बैंकको अनुमान छ । यो सन् २०१९मा ७९ प्रतिशत थियो ।
कतिपय देशहरूलाई न्यून ब्याजद दरले उच्च ऋणभारमा बाँच्न सहयोग गर्छ । उदाहरणका लागि जापानको ऋण भार जीडीपीको २०० प्रतिशत नाघि सकेको छ तर पनि ऋण दिन नोट छाप्नु पर्छ । यो प्रवृति अमेरिका र युरोपका कतिपय केन्द्रीय बैंकले पनि अनपाउने छन् । तर केही औसत जीडीपी बृद्धि भएका देशहरूमा वर्षौ देखि न्यून ब्याज दरको अवस्था रहेको छ । महामारी आउन अघि देखि ऋण अनुपातहरू बढदै गएको थियो । विगत ५ वर्ष यता न्यून ब्याजदरको यस्तो व्यवहारबाट इटलीलाई फाइदा पुगेको देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ । इटलीको ऋण जीडीपीको १३५ प्रतिशतबाट बढेर १७० प्रतिशतमा पुग्ने अनुमान छ ।
करिब १ दर्जन उदीयमान अर्थतन्त्रका केन्द्रीय बैंकहरूले पनि परिमाणात्मक सहजीकरण कार्यक्रमलाई शुरू गरेका छन् । ठूलो आन्तरिक बचतको अभाव, विदेशी लगानीमाथिको अधिकतम निर्भरता र भुक्तानी सन्तुलनको समस्याले यी देशहरूलाई यस्तो गर्नुपरेको हो ।
केही विकासशील देशहरू अर्को अवमूल्य र स्फिती चक्रमा जान सक्ने अवस्था देखिएको छ । टर्की ,ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिका जस्ता विकासशील देशहरू यस्तो अवस्था तर्फ बढिरहेको देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका आँकडा अनुसार एक दशक अघि ब्राजिलको ऋणभार जीडपीको ६१ प्रतिशत र दक्षिण अफ्रिकाको ३५ प्रतिशत रहेकोमा अब यो क्रमशः ७७.२ र ६४.९ प्रतिशतले बढने अनुमान छ ।
ऋणभारको यो विद्यमान अवस्थामा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ । यो ऋण कसले तिर्छ ? जवाफ भनेको – यसको अर्को कुनै विकल्प छ र ? कोरोना महामारीले अभूतपूर्व वैश्विक ऋणको विरासत छोड्ने भो, हैन र ?
चीनबाट भारत जाने कम्पनीमाथि टम्पले कर थप्ने
स्कुल विभागको प्रमुख कसलाई बनाउने भन्नेबारे सहमति जुट्न नसक्दा बैठक भोली दिउँसो...
नयाँ मन्त्रीको नाम भोलि टुंग्याउने गरी आजको बैठक स्थगीत भएको अध्यक्ष प्रचण्डका प्रेस...